Semalt: Web Scraping amin'ny Python - Top Advice
Ny Internet ankehitriny dia loharanom-baovao lehibe, ary maro no mampiasa izany amin'ny isan'andro mba hahita sy hanangona ny angona rehetra ilainy. Raha manao izany izy ireo, dia manamboatra web fanalana - fomba mahatalanjona an-tserasera izay afaka manampy azy ireo hamory vokatra goavana. Sehatra mahatsikaiky amin'ny tranonkala mahavariana ny sehatra Python, izay manome fitaovana manokana sy haingana ho an'ireo mpampiasa azy.
Libraries tsotra amin'ny Python
Na dia misy serivisy maromaro aza ny aterineto, dia manolotra tranokala tsotra ny Python, izay ahafahan'ny mpampiasa mivezivezy sy manangona ny angon-dry zareo. Izany dia afaka manampy azy ireo hanatsara ny vokatra, amin'ny fampitahana ny lisitry ny vidiny sy ny fampahalalana hafa, ary noho izany dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny orinasan'izy ireo amin'ny fahazoana mpanjifa hafa - corbatas seda online. Miaraka amin'i Python, mba hananganana tranonkala iray , ireo mpikaroka web dia mila mitady lamina mifampitohy, mametraka ny HTTP.
Ireo fitaovana an-tserasera manokana natolotr'i Python
Python dia manolotra tombontsoa tsara ho an'ireo mpampiasa azy. Ireo mpikaroka tranonkala dia mila mahatsiaro fa amin'izao fotoana izao dia maro ny tranonkala manana HTML sarotra. Saingy ny zavatra tsara dia hoe maro ny navigateur manome fitaovana manokana mba hahafantarana hoe aiza ny singa dia tsy manan-danja sy manaisotra azy ireo. Ohatra, ny mpikaroka web dia afaka mampiasa tsara tarehy tsara tarehy, izay fitaovana fanasivanana tena tsara. Soupa tsara tarehy manome ny mpampiasa sasany fomba haingana sy tsotra ho an'ny tranonkala manarona. Raha ny marina dia manova ny votoaty miditra sy mivoaka tsy ho ela mankany amin'ny Unicode. Ny mpampiasa dia tsy voatery hieritreritra ny fehezan-koditra iray - dia fitaovana tsotra sy mahomby izay azo ampiasaina mora foana. Ohatra, rehefa mampiasa ny HTML sasany ny mpampiasa dia afaka manondro mpamboly hazo izy ireo, amin'ny fampiasana parser HTML (izay misy ao Python). Raha mila ny mpangataka azy ireo ny mpampiasa mba hitady ny anton-kevitra rehetra ilainy, dia mila mitady code manokana (HTML) izy ireo ao amin'ny tranonkala sasany manerana ny Internet. Mazava ho azy, tsy maintsy mahatsiaro izy ireo fa maro ireo mpizahiran-tranonkala ahafahany mamantatra ny code surce amin'ny HTML, amin'ny fampiasana tsotra fotsiny ny tsindry. Rehefa mihazona ny kaody HTML misy pejy iray dia azony atao ny mijery ny rakitra rehetra ilainy mivantana.
Pejy misy pentina amin'ny Python
Raha te hanaparitaka pejy manontolo miaraka amin'i Python izy ireo, dia afaka mampiasa ny lohateny manokana izay hita eo an-tampony. Raha manao izany izy ireo dia afaka maka ny anaran'ny vokatra na rohy hafa (toy ny rohy YouTube) avy amin'ny sisiny. Raha ny marina dia mampiasa fitaovana teknolojia avo lenta i Python mba handinihana ny antontan-taratasy sy hahazoana vokatra mahafa-po. Amin'ny ankapobeny, io fampiharana io dia manohana ny rafitra samihafa ary manolotra fomba tsotra sy tsotra ho an'ireo mpampiasa azy. Vokatr'izany, ny tranonkala dia afaka mahita mora foana ny angon-drakitra any anaty aterineto amin'ny fotoana rehetra aniriany. Ankoatra izany, manome fahafahana ny olona hanamboatra ny tetikasany manokana. Izany fomba izany no ahafahan'ny orinasa maro mamboly angona isan-karazany avy amin'ny tranonkala maimaim-poana isan'andro. Vokatr'izany dia afaka mandinika ny fampahalalana rehetra momba azy ireo any aoriana amin'ny alàlan'ny ordinaterany izy ireo. Fomba lehibe hahitana izay rehetra ilainy, handresy ireo mpifaninana aminy, hanolotra tsaratsara kokoa sy vokatra tsara kokoa ary hihazona ny mpanjifany ho afa-po.